‘होस्टेल ब्याक अगेन’का लागि अमेरिकामा कास्टिंग कल आहवान - Everest Dainik - News from Nepal
‘होस्टेल ब्याक अगेन’का लागि अमेरिकामा कास्टिंग कल आहवान
काठमाडौं, असार ३ । व्यवसायिकरुपमा अत्याधिक सफल मानिएको नेपाली चलचित्र ‘होस्टेल’को तेस्रो संस्करण ‘होस्टेल ब्याक’ अगेनका लागी अमेरिकामा कास्टिंग कलको आहवान गरिएको छ ।
चलचित्र दुर्गीश फिल्म्स् र ब्ल्याक हर्स प्रोडकसन एलएलसीको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण हुने छ । विभिन्न देशबाट अमेरिकामा पढ्न गएका अन्तरराष्ट्रिय बिद्यार्थीका कथा समेटिएको यस चलचित्रको निर्देशन भने नेपालका सफल चलचित्र निर्माता सुनिल रावलले गर्ने भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अभिनेत्री आशिकाको यस्तो छ अठोट !
आवेदन दिने अन्तिम मिती अगष्ट १५, २०१९ सम्मलाई तोकिएको छ। ईच्छुक आवेनकर्ताले…. मा आफ्नो आवेदन दिन सक्नेछन् ।